पालिकाभित्र विकास निर्माणका योजनाहरु भौगोलिक अवस्था र समानुपातिक पद्धतिमा सञ्चालन गरेका छौ : अध्यक्ष केसी - Palikanews.com
२३ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:००
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये तीव्र विकास र सही नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण उहाँले आफ्नो गाउँपालिका दार्मामा मात्र नभएर अन्य स्थानीय तमा समेत लोकप्रियता हासिल गर्नुभएको छ । लगनशील, हँसिलो र सरल स्वभावका केसीले जनउत्तरदायी शासन सञ्चालन तथा विपद् व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण नियन्न्त्रण तथा समानुपातिक विकासमा सक्षम भूमिका खेल्नुभएको छ । दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्षमा नेकपाबाट निर्वाचित युवा नेता निमबहादुर केसीसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रिर रहेर अध्यक्ष केसीसंँगको कुराकानी :
केसीः शुरुमा हामीले जनचेतनाको अभियान सञ्चालन ग¥यौँ, टोलटोलमा खोजी तथा निगरानी समूह गठन गरेर परिचालन गरियो । होम क्वारेन्टाइन, सामुदायिक क्वारेन्टाइन, पालिका क्वारेन्टाइनमा बाहिरबाट आएका नागरिकलार्ई कम्तीमा १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसालियो । हालसम्म गाउँपालिकाभित्र एक हजार ३०२ जनाको पिसिआर जाँच गरिएको छ । पोजिटिभ देखिएका १८ जनालाई आइसोलेशनमा राखियो ।
यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्री पालिकाले खरीद गरेर व्यवस्थापन ग¥यो । नाकामा कडाइ गरियो, लकडाउन सफल गरियो । अहिले तीन महिनादेखि लगातार चौथो पटक पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएका छैनन् । लक्षणवाला बिरामी पनि कोही देखिएको छैन । अब लकडाउन खुलेसँगै जोखिम बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि पछिल्लो स्वास्थ्य प्रोटोकल र निर्देशनअनुसार काम गर्ने तयारी गरिएको छ । अहिलेसम्म अवस्था सामान्य छ, अब यसै भन्न सकिँदैन ।
हाम्रो गाउँपालिकामा भित्रिने नाकाहरुमा हामीले स्वस्थ्य जाँचलाई कडा पारेका थियौँ । कुनै पनि नागरिक हाम्रो गाउँपालिकामा प्रवेश गर्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुपथ्र्यो । अझ हामीले जिल्ला बाहिरबाट आउने नागरिक र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकहरुलाई सीधै क्वारेन्टिनमा बसाल्ने व्यवस्था गरेका थियँौ ।
क्वारेन्टिनमा बसेर पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि कम्तीमा पनि सात दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि समुदायमा प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन पाएन । यसका साथै स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र आमनागरिक मिलेर सचेतना र व्यवस्थापनलाई योजनाबद्ध रुपमा लागू गर्न सफल भयौँ जसले कोरोना संंक्रमण समुदायमा फैलिने अवस्था सिर्जना हुन सकेन ।
क्वारेन्टिन र आइसोलेशन निर्माण र सञ्चालनमा जनताले ठूलो सहयोग गरे । हामीले यसमा आर्थिक मितव्ययितालाई पनि विशेष ध्यान दिएका थियाँै । गाउँपालिकाभित्र अर्थ अभावका कारण खाद्यान्न संकटमा परेका परिवारहरुलाई निःशुल्क रुपमा खाद्यान्न पनि उपलब्ध गरायाँै जसले गर्दा सहज रुपमा हामीले छोटो समयमै पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबै तयारी पूरा गर्न सफल भयौंँ ।
कोरोना संक्रमणको भय अझै बढिरहेको छ । अहिले त यहाँको गाउँपालिकाभित्र कोरोना संक्रमितको संख्या शून्य पुगिसकेको छ तर पनि यस विषयमा यहाँले आगामी रणनीति कसरी तय गर्नुभएको छ ?
अब अर्को प्रसंगमा । यहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा धेरै प्रशंसा गर्नलायक कार्य गरेको भन्ने सुनिन्छ । छोटकरीमा यहाँले आफू अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि र भइसकेपछिका परिवर्तन भन्न सक्नुहुन्छ ?
उल्कापात नै त गरे जस्तो केही लाग्दैन, भएको बजेट र स्रोसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरेर तीव्र र दिगो विकासको जग बसाउने प्रयास भएको छ । विगत २०– ३० वर्षमा समेत हुन नसकेका काम गएको ती वर्षमा गरेको मेरो सप्रमाण दावी छ । विशेष गरेर लिफ्ट प्रणाली खानेपानी, विद्युतीकरण, सडक निर्माण र स्तरोन्नति, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरवृद्धि, दुग्ध विकास आदि गाउँपालिकाभित्रका महत्वपूर्ण विकासका उपलब्धि हुन् ।
गाउँपालिकाभित्र विकासनिर्माणका योजनाहरु भौगोलिक अवस्था तथा समानुपातिक पद्धतिमा सञ्चालन गरिएको छ । हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रीय विद्युत्बाट धेरै टाढा थियो । यसका साथै हरेक बस्तीलाई जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको थियो । स्थानीयस्तरमा रहेका स्रोतसाधनलाई अधिकतम सदुपयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा व्यावसायिक उत्पादनमा वृद्धि जस्ता कार्य गरिएको छ तर पनि यो पर्याप्त छैन, यसलाई बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
मानिसहरुलाई हरेक पछि अर्को सुविधाले सधैँ तानिरहन्छ तर पनि हाम्रो दार्मामा सबै कुरालाई समेटेर लिने अधिकतम प्रयास पनि गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई सबै नागरिकसमक्ष समानुपातिक ढंगबाट पु¥याउनका लागि गाउँपालिकाले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन तर पनि यहाँ खण्डित बस्ती, चेतनाको विकास, निरपेक्ष समानताको माग, सीमित बजेट र साधनस्रोत, असीमित माग र आवश्यकता प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।
हामीले गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालय र आसपासका बस्तीमा गत वर्षदेखि नै बिजुली पु¥याएका छौँ । सबै बस्तीमा बिजुली पु¥याउने चाहना हुँदाहुँदै पनि बजेट अभावका कारण काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । अझै पालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कम्तीमा पनि रु १२ करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
काम गर्न विकास बजेटले मात्र गर्ने होइन, दृढ इच्छाशक्ति र कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक नेतृत्व तथा टिम स्पिरिट चाहिन्छ । हरेक नागरिकको पनि आफ्नो अधिकारका अलावा राज्यप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुने गर्छ । त्यसैले समृद्धिको बाटामा हामी सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ ।